Iprofayile yenkampani-Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co, Ltd.
I-Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co, Ltd.yinto yeshishini elinobuchwephesha obuphezulu elidityaniswe nalo lonke uluhlu lwe-R & D yokujonga abaguli, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
I-headquarter ibekwe e-Shenzhen China, kwintlambo yesilicon yase China izixhobo zobugcisa eziphezulu. Zingaphezulu kwama-20 iiofisi zamasebe kunye nee-ofisi zenkonzo emva kokuthengisa elizweni. Sinikezela kwaye sithumela iimveliso kumazwe angaphezu kwama-90 nakwimimandla kwihlabathi liphela. Phantse ama-10,000 amaziko ezonyango asebenzisa iimveliso zeHwatime yonke imihla.
Ngelixa kuqinisekiswa umgangatho wemveliso, iHwatime Medical ijonge phambili ekusebenzisaneni namaqabane ethu ngesiseko sokuxhamla kunye nokwenza ikamva eliqaqambileyo ngamaxabiso afanelekileyo kunye neenkonzo ezingcono.
Iimveliso ngentando yakho kunye logo ziyafumaneka. Wamkelekile ukuba wabelane ngombono wakho nathi kwaye masisebenzisane ukwenza iimveliso zibe nobuchule ngakumbi.
Iwaranti kunye neParaza